Amathebulethi wokuhlanza we-OPS | I-Windshield Washer Fluid enhle kakhulu
Izimpahla Zokuhlanza Imoto
Imikhiqizo Yokuhlanza Ukungaphakathi Kwezimoto
I-Car Wash Shampoo Formula
Amathebhulethi okuhlanza ama-Effervescent
I-Multifunctional Effervescent Spray Cleaner
Isifutho se-Odor Eliminator
Isandla seSanitizer Gel
Windshield Washer Amathebulethi
Ikhaya / Imikhiqizo / Amathebhulethi okuhlanza ama-Effervescent
I-Windshield Washer Tabletencent ye-wiper fluid, ingashintshwa ibe yi-washi fluid yesizini yonke (ayisetshenzisiwe ngaphansi kwe-32 ℉), inekhono lokuhlanza elinamandla.
Ithebhulethi eyodwa emanzini e-4L izolingana no-4L washer fluid. Ukusetshenziswa kwama-enzymes webhayoloji ukubola amabala ukuze kutholakale umphumela ohlanzekile, onobungane bemvelo kakhudlwana, okungeyona ubuthi,
akukho i-bleach yamakhemikhali. Ithebhulethi yokuhlanza i-ufanisi
♣ It dissolves ngokushesha, kalula ukususa ukungcola kusuka ingilazi.
♣ Ithebhulethi ye-1 + Amanzi we-4L = I-4L yama-Windhield washer fluid
♣ Ukusebenza kangcono kune-traditional agent yokuhlanza.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka, usayizi omncane, izindleko ezinhle futhi kulula ukuthwala.
♣ I-bt ubisi ifilimu ebisiwe, ibhokisi lombala, ifilimu ye-alum, njll.
Thola isilinganiso Mahhala
Kungani kubalulekile ukukhetha uketshezi olunamandla lomoya we-wiper?
Ukusebenzisa isikhathi eside emvelweni wangaphandle, isihenqo somoya somoya sakho sishayekile futhi sinemikhankaso eminingi.
Ngokwezibalo zeminyango yamandla, kulesi sigameko sokushayisana, I-70% yazo ibangelwa umbono ompofu wesikrini somoya!
Kulula ukuguga umshini womphephelo womoya ngenxa yokuvezwa kwelanga kanye nemvula nsuku zonke uma ubuso bengavunyelwe noma behlisiwe,
kulula ukufinyeza ukuphila komsebenzi we-tape yokunamathisela futhi isihlalo somoya sizoba nzima ukuhlanzwa!
Empeleni, yenza i-windshield yakho isherid fluid izinto ezilula kangaka!
Ukushisa ngamanzi ase-acid • Ukulimala ngamazinga okushisa aphezulu • Ukuhlukaniswa kanye nesihlabathi somoya esidlangile
Lezi zimo zivame ukubangela ukulimala kanzima kumphemeli womoya.
Ukukhetha okungalungile kwe-windshield wiper fluid kungabangela ukuba udoti noma inkungu igwetshwe esikrinini
okuyinto engakwazi ukuhlanzwa ngokuphelele, okuholela ekubonweni okungafani.
Unomkhuba onjalo ongafanele?
Esikhundleni sokugeza imoto nge yonke inkathi ye-windshield isher, sebenzisa i-powder yokushisa, i-powder yokugeza, njll?
Noma ugeza ngqo imoto ngamanzi ahlanzekile?
Yimuphi umonakalo owenzayo?
Vala ibhulovu yokufiphaza, Hlanganisa i-hose yerabhaja, Harden the windscreen wiper, uphahla phezulu.
Ama-tablet we-OPS Effervescent Cleaning Tablets, yenza i-windshield engcono kakhulu ye-washer fluid.
Inzuzo enkulu eyisikhombisa kanye nesici sethebhulethi yomshini wokuhluza we-Windware.
Ngokushesha nangokusebenza kahle ekususeni ifilimu yamafutha:
♦ Ngokushesha hlambulula ifilimu yamafutha yesikrini somoya ngaphandle kwesikhumba samanzi, futhi singandisa impilo yomphemeli womoya womoya.
Ukuvikelwa kwe-windscreen wiper:
♦ Ukusetshenziswa kakhudlwana kwalesi mkhiqizo kunganciphisa umshini wokucwilisa umoya, ngakho-ke ungathinta kangcono isiphequluli somoya kanye nokuhlinzeka ngokuphila kwesikhathi eside.
♦ Akukho ukukhipha noma ukuqhuma emgodini, ngaphandle kokubola.
I-her ithebhulethi ye-washer ye-1PC = uketshezi lwe-wiper ye-4L, longa isikhala emotweni.
Kuyadingeka ngezinsuku zemvula:
♦ Ifilimu yamafutha ayikwazi ukususwa, kungani ungangeze lo mkhiqizo ukuze ususe izinkinga eziletha ngamafutha ifilimu
Ukudlulisa ukukhanya okuphezulu, umbono ocacile:
♦ Isiphequluli se-windscreen ihlanzekile futhi sinamathele, sibala ngokucacile, vumela ukushayela ngokuphephile.
Ukusetshenziswa okubambisana nokusetshenziswa komuntu ngamunye:
♦ Kungakhathaliseki ukuthi iklayenti iyisebenzise kunoma yisiphi isikhathi, i-windshield washer fluid ebusika futhi unomphumela omuhle kakhulu!
Kepha kuzonezela utshwala emafutheni asher we-Windhield
Ungasebenzisa kanjani amaphilisi e-washer e-windshield?
I-1. Vula isembozo se-kettle yemoto bese ugcwalisa ngamanzi ahlanzekile
I-2. Thatha ithebulethi ye-effervescent bese uyibeka ku-kettle
I-3. Vula imishini yokuhlanza imoto emotweni futhi ukuhlanzwa sekuphelile.
Uyabona, i-windshield eyakhelwe indlu isherdi Kulula noma kunzima ukusebenza? Impendulo yinto elula!
Ufuna umphakeli onokwethenjelwa we-washer amaphilisi we-windowshi? Xhumana nathi lapha ukuthola eminye imininingwane!
I-Effervescent Cleaning Tablets Specifications Sheet
Amathebhulethi okuhlanza ama-Effervescent, I-windshield engcono kakhulu ye-washer fluid
Umkhiqizo we-Spec. I-1PC noma ama-pcs amaningi agcwele
ukubukeka Ithebulethi ehlanganisiwe
Isikhathi sokuqinisekisa 5 Iminyaka
Usuku lokuthumela Emasontweni amabili.
Imininingwane engaphezulu, Xhumana nathi
Sicela uqinisekise ukuthi ungumuntu ngomuntu Isihlahla.
I-NO.208, i-Dongxi Industrial Park, i-Wucheng, i-Jinhua, i-Zhejiang, i-China.
Ngaphandle okumangalisayo, imikhiqizo yokuhlanza imoto yangaphakathi, imikhiqizo yokuhlanza imoto iningi, imoto eveza abahlinzeki bemikhiqizo. Amaphilisi okuhlanza ama-multifunctional effervescent esebenzisa emakhaya noma emotweni.
Copyright © 2017 Zhejiang OPS Environmental Protection Technology Co, Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe
Skrolela emuva phezulu